Onye nnọchi anya mba US ọhụrụ na Tanzania mechara bido njem ọrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Onye nnọchi anya mba US ọhụrụ na Tanzania mechara bido njem ọrụ
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye nnochite anya US na Tanzania Dr. Wright na Onye isi ala Magufuli
Onye nnochite anya US a họpụtara ọhụrụ na Tanzania, Dọkịta Donald Wright, ewegharala ọrụ ya mgbe ọtụtụ afọ nke ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya US na isi obodo azụmahịa nke Tanzania Dar es Salaam na-agba ọsọ n'okpuru Charge de Affaires site na nkwado site n'aka ndị ọrụ nnọchi anya obere.
Onye isi ala US Donald Trump akpọwo Dr. Wright a họpụtara mgbe ahụ onye nnọchi anya ọhụrụ na Tanzania na njedebe nke afọ gara aga na-ahapụ ihe dịka afọ 3 nke Emlọ Ọrụ Embassy nke United States na isi obodo azụmahịa nke Tanzania nke Dar es Salaam na-agba ọsọ n'enweghị onye nnọchi anya a họpụtara ahọpụta.
Whitelọ White House kwupụtara nhọpụta nke Dr. Wright na Septemba 30 nke afọ gara aga. Dr. Wright wasụrụ iyi dị ka onye nnọchi anya US na Tanzania n'April 2, 2020, na Washington, DC
Dr. Wright weghaara njem nke ndị nnọchi anya gọọmentị na Tanzania mgbe Mark Bradley Childress bụ onye jere ozi dị ka onye nnọchi anya US na Tanzania site na Mee 2014 ruo Ọktọba 2016 mgbe ọ hapụrụ Tanzania were ọrụ ndị ọzọ.
Onye isi ala Tanzania, Dr. John Magufuli natara asambodo nke onye nnọchi anya US ọhụrụ na Sọnde, Ọgọstụ 2 wee kwuo na Tanzania ga-aga n'ihu na-ewusi mmekọrịta akụkọ ihe mere eme na United States of America.
Dr. Magufuli rịọrọ ka onye nnọchi anya mba US ọhụrụ ahụ kpọọ ndị na-etinye ego na United States ịkpọ oku ka ha guzobe itinye ego ha na Tanzania, na-ekwu na gọọmentị ya ga-adị njikere mgbe niile ịkwado ha.
N’ikwu okwu obere oge ka o nyesịrị akwụkwọ ozi nkwenye ya, Dr. Wright, onye ghọrọ onye nnọchi anya US nke iri na itoolu na Tanzania, kwughachiri Onye isi ala Magufuli ike nke mmekọrịta ogologo oge dị n’etiti US na Tanzania.
Dr. Wright gwara Onye isi ala Tanzania mgbe o gosipụtara asambodo ya, "A na m ele anya ịrụ ọrụ iji wusie mmekọrịta anyị na mba abụọ ike ahụike, nchekwa, ọchịchị na agụmakwụkwọ."
Tupu a họpụta ya na njem nke Tanzania, Dr. Wright jere ozi dị ka onye odeakwụkwọ nke Ngalaba Ahụike na Ọrụ Ndị Mmadụ (HHS), isi ụlọ ọrụ ahụike US Government.
United States bụ onye kacha enye nkwado na mmepe ọrụ ahụike na Tanzania, ọkachasị ịba, ajọ ọrịa na-efe efe na-efe efe, yana HIV AIDS.
Na 2018, gọọmentị United States nyere Tanzania $ US $ 682 iji mejuputa ọrụ ahụike na-ekpuchi ịba na ụkwara nta.
America anọrọla n’iru inyere Tanzania aka na mkpọsa mgbochi ịchụ nta nke iji chekwaa enyí ndị Africa na ụdị anụmanụ ndị ọzọ na-achọ ịnwụ na ịchụpụ.
Ichekwa anụ ọhịa bụ mpaghara ọzọ gọọmentị US gbara mbọ ịkwado Tanzania site na United States Agency for International Development (USAID).
Gọọmentị US na-akwado ndị Tanzania na mba ndị ọzọ dị n’Africa ịlụso iyi ọha egwu mba na paireti n’Oké Osimiri India agha.
Ka ọ nụsịrị ọkwá ọhụrụ ya na Dar es Salaam, a na-atụ anya onye nnọchi anya mba US ọhụrụ ka ọ na-ebute ụzọ site na diplomacy akụ na ụba n'etiti Tanzania na US n'etiti ngalaba akụ na ụba na-achịkwa nke Tanzania na-achọ mmekọ America.
United States bụ nke abụọ n'ime ndị njem nleta dị elu na-eleta Tanzania kwa afọ. Ihe karịrị ndị America 55,000 na-eleta Tanzania kwa afọ.